खानेपानीको समस्याले पिरोलिएको धरानमा २ अर्व रुपैयाको खानेपानी योजना शुरु
Home अन्तर्वार्ता खानेपानीको समस्याले पिरोलिएको धरानमा २ अर्व रुपैयाको खानेपानी योजना शुरु
खानेपानीको समस्याले पिरोलिएको धरानमा एशियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा झनै २ अर्व रुपैयाको खानेपानी योजना शुरु भएको छ । २०१३ देखि काम थालेर २०१७ मा सम्पन्न गरिने सो योजना अन्र्तगत झण्डै पाउने २ अर्व रुपैया बराबरको कामहरु गर्न गराउन काठमाण्डौको बिल्डि∙ डिजायन अथोरेटी (विडिए) नामक प्राईभेट कम्पनीले जिम्मेवारी पाएको छ । हालै धरान नगरपालिका संग औपचारिकरुपमा नै सम्झौता भई यस कम्पनीले धरान १६मा कार्यालय स्थापना गरी प्रारम्भिक काम पनि शुरु गरीसकेको छ । सो कम्पनीका निर्देशक हुनुहुन्छ अनिल भण्डारी । भण्डारी खानेपानी तथा सरसफाई विषयका सिनियर ईन्जिनियर हुन । उनै भण्डारी संग परियोजनाको बारेमा स्वतन्त्र पत्रकार आनन्द श्रेष्ठ संग भएको कुराकानीको अशं प्रस्तुत छ ।
१ धरानमा पहिलो पटक ठुलो बजेटको काम पाउनु भएको छ विडिए कस्तो कम्पनी हो र यसले कहा“ कहा काम गरेको अनुभव छ ?
अनिल नेपाल १९७५ सालमा स्थापना भएको हाम्रो कम्पनीले १९९५ साल सम्म भवनहरुको डिजायन गर्ने मात्र काम गथ्र्यो । त्यस पछि खानेपानी,सडक,ढल जस्ता बहुआयमिक शहरी विकासमा पनि काम गर्न थालेको छ । यसले अहिले सम्म एसियाली विकास बैंक कै साना शहरी विकास आयोजना अन्तर्गत महेन्द्र नगर,कोहलपुर,ईटहरी,धनकुटा,लेटा∙,ईन्द्रपुर, चारआली, का“करभित्ता जस्ता शहरमा गरि सकेको छ । एडिवी नै लगानीमा धुलिखेल,चितवन,हेटौडा लगायत १० शहरमा शहरी वातावरण विकास परियोजना (युईआईजी) हरु सम्पन्न गरि सकेका छौ । यसै गरि एडिवी कै सेकेण्डरी टाउन अरभान ईन्भारोमेन्ट विकास परियोजना विराटनगर,विरगजं र काभ्रे भ्याली मा सम्पन्न गरि सकेको छ । त्यस पछि एडिविको तेस्रो चरण को परियोजना एकीकृत शहरी विकास आयोजना (आईयुडिपि) हो जस अन्र्तगत धरानमा पानीको काम हुदैछ ।
अहिले सम्म हामीले काठमाण्डौे सिंह दरवार स्थित राष्ट्रिय योजना आयोगको ८० करोेड को भवन, कालिमाटिमा निर्माणाधीन ६० करोड को गणतन्त्र स्तम्भ । लिंकन स्कुल ६० करोडका, एम सी कलेज (४० करोड), मेलाम्ची खानेपानी आयोजना (६० करोड) ढेड अर्वको एकिकृत वागमती सुधार परीयोजना लगायत थुपै्र कामहरु गरेका छन् ।
२. जनशक्ति पनि प्रस्तै होला ?
झण्डै २ सय कर्मचारी भएको हाम्रो कम्पनिमा ६ जना निर्देशक छौं । भण्डै देड सय जना ईन्जिनियर र ओभरसियर मात्र छौ । नेपालका प्रसिद्द वातावरणविद्द ,समाजशास्त्री अर्थशास्त्री तथा भु–गर्वशास्त्री रहेका छन । काठमान्डोैमा मुख्य कार्यालय ४ वटा शाखा छन् भने मोफसलमा विराटनगर, धरान, काकारभित्ता,धनकुटा र वीरगन्जमा पनि शाखा कार्यालयहर छन् ।
३) धरानमा तपाईहरुले नै कसरी काम पाउनु भयो ?
एडिबीको आव्हन अनुसार हामीले प्राविधिक र आर्थिक कुराहरु राम्रो प्रस्ताव हालेकोले हामीले काम गर्ने मौका पाएको छौं ।
४) धरानमा के कस्तो पानीका कामहरु हुने छन ?
यो परियोजना ज्यादै व्यवस्थित वैज्ञानिक ढंगबाट अघि बढ्ने छ । २०१३ देखि शुरु भई २०१७ सम्म सम्पन्न गर्ने परियोजनामा हाम्रो मुख्य काम भनेको परियोजनाको विस्तृत डिजायन गर्नु हो । जस अन्र्तगत जंगलबाट पानी निकाल्ने,हाल भईरहेको ईन्टेक पाईप,मुहान हरुको सर्भे गर्ने । अवको ६ महिना भित्र ठूला ठेकदारहरुको चयन गर्ने, खानेपानी संचालनको लागी नागरीक वोर्ड गठन गर्ने लगाएत हरेक कामको हामीले बनाएको डिजायन अनुसार काम लगाउने , अर्थात सुपरभिजन गर्छौ ।
५) भुमीगत पानी बाहेक अहिले भइरहेको सर्दु जलाधार क्षेत्रको संरक्षणमा पनि प्रोजेक्टले काम गर्छ त?
भरसक जलाधार क्षेत्रको पानीबाट पुग्छ भने विजुलीको खपत गरि किन निकाल्ने ? त्यसैले हाल भईरहेको धरानका सबै जलस्रोत हरु जस्तो कालिखोला,सर्दु, खर्दु,पकुवा,सेउटी सवैका संरक्षण गर्ने काम हुन्छ । हाल खाईरहेको सबै जलस्रोतको ईन्टेकहरु मर्मत सम्भार पानीको गुणस्तर वृद्धि गर्ने, स्वच्छ सफा पानीको लागी पनि योजना गम्भिरता पुर्वक काम गर्छ
६) त्यसो भए धरानका जनताले प्रसस्त पानी खाना ५ वर्ष कुर्नु पर्ने हो ?
हामीलाई दिएको समयसीमा अनुसार चाहि प्रोजेक्ट २०१७ मा सम्पन्न हुने हो अर्थात ५ बर्ष नै कुर्नु पर्छ । तर यहा“को समस्यालाई हेरेर हामी भरसक पहिलो काम नै अहिले भएको स्रोतको सुधार गरी पानी बढाउने तिर लाग्छौं ।
त्यसको लागि खोलाको इन्टेकहरु बनाउन थाल्छौं । त्यसपछि यसै वर्ष जंगलबाट भुमीगत पानी टेष्टको लागि निकाल्न थाल्छौ । त्यहि पानीलाई नियमितरुपमा निकालेर अहिलेको टंकीमा जम्मा गर्ने हो भने आउदो बर्ष देखि नै पानीको समस्या नर्पला भन्छौ हामी । भरसक छिट्टै धरानवासीलाई स्वच्छ सफा र प्रसस्त पानी खुवाउने हाम्रो लक्ष्य हो । यसको लागी हामीले धरान १६ मा कार्यालय
स्थापना गरी काम शुरु गरिसकेको छौं । हाम्रो प्रोजेक्टको टिम लिडर नेपाल खानेपानी संस्थानका पुर्व निर्देशक रहिसक्नु भएका वरिष्ठ ईन्जिनियर धुव व.श्रेष्ठ हुनुहुन्छ । त्यसै गरि धरानको खानेपानी व्यवस्थापनको लागि नेपालको खानेपानी संस्थाका पुर्व महानिर्देशक कौशल भट्रराई ,वातावरण पक्ष हेर्ने वरिष्ठ वातावरण विज्ञ डा. सुवोध शर्मा हुनु हुन्छ ।
७) केहि नगरवासीहरुले चतराबाट पानी नल्याएर किन भुमिगत पानीको भर गरिन्दैछ भन्ने प्रश्न गरी राखेका छन ? के दिर्घकाल को लागि यो श्रोत प्रयाप्त छ त?
एडिबीले पहिला चतरा कै पानीको अध्ययन गरेको हो । त्यस भन्दा अघि खानेपानी संस्थानले पनि अध्ययन गरी सकेको थियो । तर चतराको तुलनामा आफनै नगर भित्रवाट उपलव्ध भूमीगत पानी काृे योजना सम्पन्न गर्न समय र बजेटको हिसाबले पनि ठूलो सहुुलियत देखिएकोले भुमिगत पानी लाई प्राविधिकहरुले प्राथमिकता दिईएको हो । यहा“ पनि प्रसस्त पानी छ । चतराको पानी ल्याईदा उपभोक्तालाई महंगो पनि पर्ने देखिन्छ । टाडाबाट ल्याउनु पर्दा बाटोको अवरोध झेल्नु पर्ने समस्याहरुको कारण पनि त्यहाको योजना क्यान्सील गर्नु परेको हो जस्तो लाग्छ । भूमीगत पानी स्वाथ्यको दृष्टिकोण वाट पनि धेरेै रामे हो भने हाल खानेपानीले निकालीरहेको जंगलको पम्पहरुमा पन्ध्रौ वर्ष देखि एक ईन्च पनि पानीको लेभल घटेको छैेन त्यसैले यहा पानी सुक्छ भन्ने भनाई पनि गलत हो ।
८) अन्तमा धरानबासीलाई केहि भन्नु हुन्छ की ?
धरानबासीलाई छिट्टो स्वच्छ र सफा पानी खुवाउने हाम्रो लक्ष्य हो । धरानको पानी विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुरुपको बनाउने प्रयास हुनेछ अर्थात मिनिरल वाटर जस्तै हुने छ । चुहावट ४५ बाट १५ प्रतिशतमा झाने छौं ।
यो योजना ५ वर्षको भए पनि भरसक यसै बर्ष देखि नया“ मुहानबाट पानी निकालेर टंकीमा भरी दिने र पानीको संकट टार्ने हाम्रो प्रयास हुनेछ । जंगलबाट पानी निकाल्न एउटा जापानीज कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिई सकेको थियौ । सो काम यसै हप्ता देखि हुने पर्ने थियो । तर नेपाल सरकारले अझै बजेट नदिएको कारण हाम्रो काम २ महिना पछि सरेको छ । यसरी सरकारी,राजनीतिक कारणले प्रोजेक्टलाई डिस्टप हुने काम भएमा स्थानिय जनता र राजनीतिक, सामाजिक सघसंस्थाले सचेत गराउन अनुरोध गर्दछौं ।
हामीबाट गरिने हरेक काम उत्कृष्ट हुनेछ । हाम्रो यहि छापलाई हेरेर पनि प्राय सवै दातृ निकायले हामीलाई काम दिने गरेको सहर्ष जानकारी गराउन चाहन्छौ ।